သတ္တိခဲ သူရဲကောင်းဆရာဝန်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သတ္တိခဲ သူရဲကောင်းဆရာဝန်….
Posted by zaylay on Jul 18, 2010 in News |0comments
၁၉၆၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ အန္တာတိတ်ဒေသကို လေ လာရေးခရီးရောက်ရှိနေတဲ့ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံ (ထိုစဉ်က ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပေါ့ယခုတော့ ရုရှား ပါ….) မှ လေ့လာရေးအဖွဲ့ တစ်ခုရဲ့ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ လီယိုနစ်ရိုဂိုဇော့ဗ် တစ်ယောက် ၎င်းရဲ့ ညာဖက် ၀မ်းဗိုက်
အောက်ပိုင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားခဲ့ ရပြီး အဖျားလဲ တက်လာခဲ
့ရပါတယ်… နောက်တစ်နေ့ မှာတော့ သူ့ ရဲ့ အခြေအနေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ
့ပါတယ်…ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ ပို့ ပေး မည့် လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်လည်း ခေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသည့် အပြင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ကပင် ထို နိုဗိုလာရက်ဆကာယာ လေ့ လာရေးစခန်း ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောဆရာဝန်ဖြစ်နေခဲ့ တာမို့ သူဟာ ရနိုင်တဲ့ ထုံဆေးများကိုသာ အသုံးပြုပြီး သူ့ ကိုယ်သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်လည်ခွဲစိတ်ကာ အူအတက်ပေါက်တာ ကိုဖယ်ရှားခဲ့ ရပါတော့ တယ်…
သူ့ ကို စခန်းရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်နှင့် မိုးလေ၀သ ပညာရှင်တစ်ဦးတို့ က
ခွဲစိတ်ရာမှာ ကူညီပေးခဲ့ ကြပါတယ်… လီယိုနစ်ရိုဂိုဇော့ ဗ်ဟာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ ရုရှား ဆေးသိပ္ပံမှ ဘွဲ့ ရခဲ
့ပြီးနောက် ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ နေရာကို ချက်ချင်းပဲ ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်… သို့ သော် သူ့ ရဲ
့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ဆက်လက်သင်ယူမှု ဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ အန္တာတိတ်ဒေသရဲ့ နိုဗိုလာဇာရေ့ ဗ်စကာယာ စခန်းကို ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ရဲ့၆ ကြိမ်မြောက် လေ့ လာရေးခရီးမှာ ဆရာဝန်အဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ ရလို ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ ရပါတယ်….။
အဆိုပါစခန်းမှာ လေ့ လာရေးခရီးစဉ် ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ ( သူကိုယ်သူပြန်လည်ခွဲ စိတ်ခဲ့ ရတဲ့ ) အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်လေးဟာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ
၁၉၆၁ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ လီယိုနစ်အတွက် စိတ်မသက်မသာဖြစ်စရာ လက္ခဏာ တွေ စတင်ပြသလာခဲ့ ပါတယ်…
သူ့ မှာ အားနည်းခြင်း၊ ရင်ပြည့် ရင်ကယ်ဖြစ်ကာ ပျိူ့ အန်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းနှင့် ၀မ်းဗိုက်ညာဖက် အောက်ပိုင်း နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်…။
နောက်တစ်နေ့ မှာတော့ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ပူချိန်ဟာ ပိုပြီးမြင့် တက်လာခဲ ပါတယ်…လူ ၁၃ ဦးပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ မှာ တစ်ဦးတည်းသောဆရာဝန်ဖြစ်တာမို့ လီယိုနစ်ဟာသူ့ ကိုယ်သူပဲ ရောဂါကို
အဖြေရှာခဲ့ ရပါတော့ တယ်..
ရောဂါရဲ့ အဖြေကတော့ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အူအတက်ပေါက်ခြင်းပါပဲ….
အနီးစပ်ဆုံးစခန်းတွေမှာလည်း လေယာဉ်ပျံမရှိသည့် အပြင် ပြင်းထန်လှသည်
့ရာသီဥတုအခြေအနေက လည်း မည်သည့် လေယာဉ်ကိုမျှ နိုဗိုလာဇာရေ့ ဗ်ကာယာ စခန်းကိုဘယ်လိုနည်းနှင် မျှပျံသန်းခွင့် မပေးခဲ့ ပါဘူး….ရေခဲပြင်လေ့ လာရေးအဖွဲ့ သားများ အရေးပေါ်နာမကျန်းဖြစ်ပါက အသက်ကယ်နိုင်ဖို့ ကတော့ စခန်းမှာပဲ ဖြစ်သလို ခွဲစိတ်ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်…။
ဒါကြောင့် အဲဒီအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကလည်း သူကိုယ်သူပြန်လည်ခွဲစိတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်….။
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ညမှာတော့ ကိုယ်တိုင်လူနာလည်းဖြစ်၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်တဲ့ သူ့ ကို စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် မိုးလေ၀သပညာရှင် တစ်ဦးတို့ က ကူညီခဲ
့ကြပါတယ်… ထိုနှစ်ဦးက သူ့ ကိုခွဲစိတ်ကိရိယာများ အသင့် ယူဆောင်ပေးပြီး သူ့ ရဲ
့ဝမ်းဗိုက်ကိုလည်းမှန်လေးတစ်ချပ် ထိုးပြခဲ့ ပေးကြပါတယ်…။
သူဟာခန္ဓာကိုယ် ကိုတစ်ဝက်ထိုင်၊ တစ်ဝက်လှဲနေပြီး ဘယ်ဖက်ကို စောင်းကာစခန်းရှိ နိုဗိုကိန်း ထုံဆေး ထိုးပြီး သူ့ ရဲ့ ဝမ်းဗိုက် ညာဖက်ပိုင်းကို ၁၂ စင်တီမီတာလောက်အထိ ဓါးချွန်ခဲ့ ခွဲခဲ့ ရပါတယ်…ပြီးတော့ သူဟာ မှန်ထဲမှာလည်းကြည့် ၊ ကိုယ်တိုင်လည်းလက်နှင့်စမ်းပြီး
ယောင်ကိုင်းနေတဲ့ အူအတက် ကိုဖြတ်ထုတ်ပြစ်ခဲ့ ကာ ၀မ်းဗိုက်မှာ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ထိုးခဲ့ ပါတယ်… စတင်ခွဲစိတ်ပြီး မိနစ် ၃၀ ကနေ ၄၀ လောက်အကြာမှာတော့သူဟာ မူးမေ့ သွားခဲ
့ရပြီး တစ်ခါမှာတော့ သူဟာခွဲစိတ်မှုကို ရပ်ပြီး အနားယူခဲ့ ရပါသေးတယ်…
သိုသော် စုစုပေါင်း ၁ နာရီနှင့် ၄၅ မိနစ်ကြာအပြီး သန်းခေါင်ယံမှာတော
့ခွဲစိတ်မှုဟာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ ပါတယ်….
ငါးရက်အတွင်းသူ့ ရဲ့ ကိုယ်အပူချိန် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ ပြီး နောက်ထပ်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ ချူပ်ရိုးတွေ ဖြည်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်…
စိန့် ပီတာစဘတ် အာတိတ်နှင့် အန္တာတိတ်ဆိုင်ရာ ပြခန်းမှာ ထိုသူရဲကောင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန် လီယိုနစ် ရို ဂိုဇော့ ဗ် ရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမှာ အသုံးပြုခဲ့ တဲ့ ခွဲခန်းသုံးကိရိယာများကို ပြသထားပါတယ်…
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာကာသယာဉ်မှူး ဂျာမာန်တီတော့ ဗ် က ၎င်းရဲ့” ကျွန်ုပ်ရဲ့ အပြာရောင်ဂြိုလ်ကမ္ဘာ ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ…
” ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်တယ်ဆိုတာ မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ်ကိုိုပြန်လည်အ သုံးချပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိူးအတွက် ) ပဲပြန်ပြီးတန်ဖိုးရှိအောင် လုပ်ခဲ
ပုလိပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို လူနာတွေကို အသုံးပြု၊ မကုသခင် ကိုယ့် ကိုယ်ကို
ဦးစွာ ပြန်လည်ထိုးနှံ (စမ်းသပ်ပြ) ခဲ့ တဲ့ဒေါက်တာဘောရစ်ပါစတုခေါ့ ဗ် ကိုကျွန်တော်တို
အန္တာတိတ်ဒေသရဲ့ ခက်ခဲဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာပင် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုပြန်လည်ခွဲစိတ်ပြီး အူအ တက်ဖြတ်ထုတ်ရဲတဲ့ ဒေါက်တာ လီယိုနစ်ရိုဂိုဇော့ ဗ် ရဲ့ သတ္တိကိုလည်း အားကျမိပါတယ်…။